Nchịkọta ahịa nke ngwaahịa starch na ngwaahịa starch. Ọnọdụ dị n’etiti coronavirus - “Potato System” magazine
Nchịkwa ahịa dị na steepụ na stachi. Ọnọdụ dị na ndabere nke coronavirus
Mmepụta steepụ na stachi bụ otu n'ime mpaghara ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi, nke na-amasịkarị ndị na-ege ntị nke akwụkwọ anyị.
Kedụ ka ahịa stachi nduku ga-esi too? A ga-enwe ọrụ ndị ọhụrụ? Mgbanwe ndị dị a toaa na-atụ anya na ụlọ ọrụ ahụ mgbe oria ojoo gasịrị? Ajụjụ ndị a metụtara ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ. Maka azịza, anyị tụgharịrị gaa Oleg Radin, Onye isi ala Njikọ nke ndị na-emepụta Russia nke ụlọ ọrụ stachi na syrup Roskrakhmalpatoka.
Ọnụ ahịa nduku na-arị elu na Armenia n'ihi oke mbupụ
Ngwurugwu nduku: choro na imeputa ihe na onwonye
Mmepụta. Naanị ụlọ ọrụ ole na ole taa na-emepụta steepụ nduku na Russia: Poretsky Starch OJSC (Republic of Chuvashia), Chuvashyenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Starch Platin LLC (Bryansk Region), Pleshcheevsky Starch Plant (Oryol Region), Syrya osisi stachi (Nizhny Novgorod mpaghara), SEC "Luck" (mpaghara Penza).
Oke a na-emepụta na mpịakọta 2019, ka ọgbakọ ahụ siri kwuo, ihe ruru puku tọn 11,8, nke dị elu karịa nke mbụ (8,0 puku tọn na 2018, 7,2 puku tọn na 2017) .
Ka o sina dị, ego a ezughi oke maka azụmaahịa ụlọ: dị ka atụmatụ dịgasị iche iche si dị, nanị ihe 30-50% na-ekpuchi mkpa nke ụlọ ọrụ Russia.
Bubata. A na-azụta akụkụ buru ibu nke ahịhịa nduku na mba ofesi. Cheta na stachi nduku na -emekarị akụkụ kachasị nke mbubata, ma e jiri ya tụnyere ọka na ọka. N'ụzọ bụ isi, ọ na-esite na Denmark, Republic of Belarus, Germany, France na Poland na-abịa Russia.
N'afọ 2019, Russia webatara 14,3 puku tọn steepụ nduku na ego nke US $ 12,3 nde (nke a bụ 38,0% ma ọ bụ 5,4 puku tọn na-erughị na 2018, yana 27,8% ma ọ bụ 3,9 puku tọn na-erughị otu oge nke afọ 2017). Mbelata nke mbubata mbubata nwere ike ịbụ, dịka ọmụmaatụ, maka mgbanwe na usoro nke ngwaahịa ndị ahịa na ntughari na starches ndị gbanwetụrụ.
N'afọ na-abịanụ, anyị anaghị edetu mgbanwe kadinal n'ụzọ a. Maka nkeji mbụ nke 2020, puku nde 2,1 dị na ala dị na Russia anabatara na Russia.
Ebumnuche, ụda olu nduku nduku na-abata mba anyị site na mba ọzọ abụghị nnukwu: ọ ga - ekwe omume maka nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ (yana ike nhazi 1000 kwa ụbọchị) iji ihe karịrị 70% dochie ya. Mana n’oge ugbu a, ndị otu ahụ enweghị ozi gbasara atụmatụ ịzụlite ụdị ọrụ a. Na mgbakwunye, poteto nke teknuzu dị iche iche (nke nwere nnukwu stachi ọdịnaya) na-emebeghị ka ọ toro na mba ahụ, ebe ihe ngwọta nke nsogbu ahụ kwesịrị ịbụ nke zuru oke ma bido site na ịkụta ihe eji eme ihe.
Mbupụ. N’afọ 2019, Rọshịa na-ebuputa steeti mkpụrụ akụ dị nde 3,9 na nde $ 2,6. Isi mba nnata: Republic of Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Tajikistan.
Na mkpokọta, ọnụ ahịa ahịa na 2019 ruru 22,2 puku tọn, ma ọ bụ 53% nke mkpokọta chọrọ. Na 2018 - 28,9 puku tọn ma ọ bụ 31%, na 2017, n'otu n'otu, 27,6 puku tọn ma ọ bụ 30%.
Enwere ike iburu n'uche na ọchịchọ maka stachi nduku ejirila otu ọkwa karịa afọ. Ihe kpatara ịda mba bụ adịghị ike nke akụ na ụba na enweghị uto na mmepụta nri megide ihe a. N'otu oge, akụkụ dị ukwuu nke ahịa nduku nduku bụ ndị na - emepụta micro - ndị ọchụnta ego n'otu n'otu (ọkachasị ebe a na - eme achịcha na ebe a na - eme achịcha), nke na - apụta ngwa ngwa ma na - apụkwa ngwa ngwa.
Atụmanya n'ahịa ụwa. N'ahịa mba ụwa, òkè ala dị na steepụ nduku bụ naanị 5%. Tapioca (24%) na ọka (41%) na-emeri. Ngwurugwu nduku bu ihe eji emeputa ihe bu ihe ndi mmadu na atugide na ha gha eto 2022% site na 2,6. N'otu oge ahụ, ọnọdụ izugbe agaghị agbanwe ma ọlị, ebe ọ bụ na, dị ka ndị ọkachamara si kwuo, òkè nke ahịhịa ọka kwesịrị ịbawanye site na 1,9%, tapioca - site na 3,4%, na ọka - site na 3,8%.
Njirimara nke ahia maka ngwaahịa starch na Russia
Afọ ole na ole gara aga na mba anyị enweela mmụba na-abawanye na mmepụta steeti ala (ya na mbubata mbubata mbubata). Isi ihe kpaliri usoro a gụnyere nnukwu arịrịọ sitere na akwụkwọ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ.
Mmụba a na-achọsi ike maka ụkọ nri afọ ise nyere ụlọ ọrụ aka ka ọ rụọ ọrụ ego ya. Iji ike rụọ ọrụ ruru pasent 76%.
Na mmegide nkea, oru ohuru bidoro na-agbasi mbọ ike, mmalite nke, dị ka ndị ọkachamara si kwuo, n'ụzọ kwekọrọ n'ọchịchọ a na-atụ anya ya, ga-emecha belata njirimara ibu na 70%.
Dịka ọmụmaatụ nke ụdị ọrụ a, etinyere "site na ịkpụ", anyị nwere ike ịkọ maka ụlọ ọrụ LLC "NewBio" na mpaghara Volgograd. Lọ ọrụ a maka iwe ọka miri emi ma nwee ikike ruru puku tọn 140 / afọ kwesịrị ịmalite ọrụ n'oge dị nso. A na-ekwuputa ngwaahịa dịka germ ọka, nri gluten, ọka gluten, maltodextrin, ọka ọka maka ịhapụ.
Ya mere, inye onyinye maka oru ngo a ga - enye aka ọ bụghị naanị na mmụba na mmepụta steepụ ala, kamakwa n'ịbawanye oke na òkè nke maltodextrin: mbupụ ngwaahịa a ga - enwe ike ịrị elu site na 20-40 puku tọn kwa afọ. Na nke a n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na na 2019, ntinye nke maltodextrin na mba ofesi abawanyela nke ukwuu n'ihi ikike zuru oke nke Gulkevichsky Starch Plant LLC.
N'ịkọwapụta ahịa Russia nke starch na ngwaahịa sirop, mmadụ enweghị ike ịchọpụta na otu esi agbanwe agbanwe (n'ime afọ ise gara aga) na-achọkarị ụdị molasses na syrups nke oke mmịpụta na ọnụ ala shuga dị na Russia. Industrylọ ọrụ ahụ na-anwa ịkwado mmepụta site na itinye ihe na mbubata na mbupu mbupụ.
Fructose syrups nyere ọkwa ọzọ na mbelata mmasị ụdị ngwaahịa a na 2019. Rịba ama na ruo mgbe 2018, ojiji nke ike nke ụlọ ọrụ maka imepụta ụdị ngwaahịa a fọrọ nke nta ka ọ gbanwee ma guzo na 80%. Agbanyeghị, na 2019, n'ihe banyere mmalite nke osisi ọhụrụ na mpaghara Kaluga, ikike nke ọnụ na-aba ụba, nke mere ka ụba ngwaahịa dị na ahịa na-azụ ahịa. N'ihi nke a, ngụkọta nke arụmọrụ belatara n'afọ (kwụsịrị na ọkwa nke 153,7 puku tọn). A na-atụ anya na ọnọdụ a ga-aga n'ihu ma ọ dịkarịa ala ọzọ ruo afọ abụọ.
Ekwesịrị ikwu okwu ole na ole banyere ahịa maka ngwaahịa pụrụ iche (starki ndị gbanwetụrụ, maltodextrin, dextrose, sorbitol, fructose, pectin). N’oge na-adịbeghị anya, ikike ọhụrụ maka imepụta ụdị ngwaahịa a apụtala na mba anyị. Ma taa anyị nwere ike ikwubi na mpịpịpụta mmepụta na-ekpuchi mkpa nke ndị na-azụ Russia (ihe a na-eme kwa afọ maka ngwaahịa pụrụ iche anaghị agafe 220 puku tọn na obere mmachi).
Yabụ, mmepụta steepụ gbanwetụrụ, o doro anya, eruola oke ugbu a, ruru 50 puku tọn. N'ezie, na -ekwupụta echiche dị otú a, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na nri edozi starches bụ heterogeneous ngalaba. Ha dabere ma na usoro mmepụta yana iji njedebe, yana n'ụdị akụrụngwa eji eme ha. Mana n’ozuzu, nke a bụ ihe dị ọhụrụ ma maka ọtụtụ ụdị ụdị ngwaahịa a na-adịghị ahụkebe. Dabere na nke a, anyị ga-ekweta na ọ gaghị ekwe omume n'ụzọ akụ na ụba iji mejupụta atụmatụ zuru ezu maka ị mepụta ụdị ụfọdụ nke nri afọ ju anya n'ihi oke mmachi. Chụpụ ngwaahịa ndị a dịkwa isi ike, ebe ọ bụ na ndị na-emepụta ọdịnala nwebere ahịa mba ofesi.
Ihe oru di otua siri ezigbo ike imezu, nwere oge ugwo a na akaghi aka, nke na –ebelata uru na mmasi nke ulo oru.
Ọnọdụ nke oria ojoo a gha aghaghi emetuta steeti ndi sitena ogu na ogwu nke obodo ahu.
Enterlọ ọrụ na-ahazi ọka abụrụla nsogbu ụfọdụ, ebe ụdị ngwaahịa a (ọkachasị ọka) na-eto n'ike n'ike, na-agbanyeghi nke gọọmentị tiri.
Nsogbu banyere ire ngwaahịa ndị emechara ga-egbo mkpa osisi ndị ahụ wetara ngwaahịa ha maka mkpa nke ngalaba HoReCa.
Ndị nrụpụta na-enweghị ụlọ nchekwa ebe ha na-azụta ngwa ọrụ n'ime obere maka iwu enyere ha ka emee nke ọma na ntinye aka nke mpaghara.
Na mkpokọta, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka peculiarities nke 2020, dị ka ụlọ ọrụ ndị esonyere na Association ahụ, nkeji mbụ ahụ gosipụtara nsonaazụ a na-enwetụbeghị ụdị ya: ọchịchọ maka ngwaahịa starch maka oge ụfọdụ gafere ọkọnọ, mana ọnọdụ gbanwere ngwa ngwa. Oge mmeghe nke oge a butere nsogbu na ụlọ ọrụ ndị ahịa, ndị na-emepụta ngwaahịa starch malitere mkpesa banyere ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ oge.
Enwere ike iche na n'ọnọdụ dị ugbu a, n'oge dị mkpirikpi, ndị na-ebunye ndị ahụ ga-enwe ike inye ndị ahịa ụgwọ nkwụnye ụgwọ ga-erite uru. N’oge na-adịghị anya, anyị na-atụ anya mbelata ihe oriri, mana dịka pasent, ọ ka siri ike ịgbakọ.
International stachi na HFS ndị ọkachamara na-atụ aro na ọrịa coronavirus ahụ ga-enwe mmetụta na-adịgide adịgide ma dị egwu na ụlọ ọrụ nri n'ụwa niile. Mana nsonaazụ ya maka akụkụ dị iche iche nke ụwa ga-adị iche.
Mba EU. Na obodo dị ka France, Germany na Switzerland, ebe ụlọ ọrụ agri-food bụ akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba, nsogbu ahụ agaghị eduga na nnukwu mgbanwe. Mba ndị a anaghị adabere na mbubata ngwa ahịa ndị ọzọ sitere na ugbo, otu isi, enweghị nsogbu nri. Site na nke a, ọ dịịrị gọọmentị mba Europe mfe ime ka ụmụ amaala kwenye ịrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ, nke nyeere aka belata mgbasa nke nje ahụ.
Mba Eshia. Kama nke ahụ, ọnụ ọgụgụ mba ndị dịka Singapore (ebe ndị ọrụ ugbo si mba ofesi na-enwe) na-echegbu onwe ha maka ihe egwu nwere ike ibute agụụ. Echere m na mgbe nsogbu a gasịrị, steeti niile ga-agba mbọ maka nnwere onwe nri. Nke mbu, o na a abawanye juju oru ugbo nke obodo n’oge ọghara ikpọ ọkọnọ, na nke abuo, ọ na - abawanye ohere mbupụ n’oge a na --ejupụta ahịa ụlọ.
Na mpaghara ASEAN, mba ndị nwere obere agri-nri (dịka Philippines, Laos, na Cambodia) yikarịrị ịmụba ihe ọkụkụ ma na-anwa imeri akụkụ nke ahịa dị na Vietnam, Thailand, na Indonesia. Ikekwe nke a ga - ebute mmụba na mpaghara mpaghara nke tapioca na stachi. Agbanyeghị, o yikarịrị ka Vietnam, Thailand na Indonesia ga-ekerekwa òkè n'ịgbasa ahịa ahịa. Mba ndị a na - erezi ala steeti ha na tapioca steeti ugbua na China, ebe a na - emegharị ngwaahịa ahụ maka ngwa pụrụ iche. Ikekwe a ga-eji uru a agbakwunyere mepụta akụrụngwa ọhụrụ na mpaghara ASEAN. Ihe ga - esite na ya nwere ike ịbụ mbelata nke mma nke ngwaahịa na - akpụ akpụ na - akpụ akpụ sitere na ndị na - emepụta Europe maka mbupụ na mpaghara ndị otu ASEAN.
U.S. United States n'oge nsogbu zuru oke gosipụtara ọrụ dị mma nke olu ọkọnọ, nke na-egosi oke mmepe nke ọrụ ọrụ ugbo. Yabụ, na California na March a dere ọkwa dị elu nke ahịa ngwaahịa nri. Dika ebe ozo, uto ndi mmadu nwere na achoro ya na ochicho ndi na-azo ahia ka ha chekwaa ahihia. Mana na ụlọ ahịa ndị America enweghị ụkọ ngwongwo - adịghị ka European, na karịsịa site na Eshia. Fọdụ ndị rụpụtara ọrụ rụzuru ihe dị ka elekere iji gboo mkpa ndị ahịa na-abawanye.
Afterwa mgbe coronavirus gasịrị. Etu ahia
Echere m na ọtụtụ ndị mmadụ dọtara uche n'eziokwu ahụ bụ na n'oge oge iche, ndị bi na-etinye oge dị ukwuu n'ịkwadebe nri n'ụlọ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ebe ọ bụ na etiti ọnwa Mach na-ere mmiri ara ehi, ntụ ọka, akwa na ngwaahịa ebe a na-eme achịcha na Europe na United States amụbawo nke ukwuu. Ọ ga - ekwe omume na mgbe ndị jụrụ ọchịchị nke kewapụrụ onwe ya, mmasị ndị mmadụ na nri n'ụlọ (gụnyere site na ngwaahịa ndị mechara.) Ga-aga n'ihu.
Ndị na-emepụta kọọdụ na steepụ starch gbanwere. Ha ga-elebara omume a anya ma nyochaa usoro nke ngwaahịa ha iji nye ngwaahịa ha arụchara arụmọrụ ọhụrụ.
Ọzọkwa, oriri zuru ụwa ọnụ nke oriri na ngwaahịa na ngwaahịa nwere ogologo shelf na-eto. Ya mere, ndị na-emepụta ihe nwere ike ịbawanye ahịrị ngwaahịa, nke ha ga-achọ ụkọ nri nwere nnukwu ọrụ, gụnyere stachi nduku.
Omume ọzọ metụtara abamuru nke nri dị mma. Mgbe nsogbu ahụ dị na USA, Europe na Esia, a na-atụ anya mmụba nke ngwaahịa "ahụike", ọkachasị ndị na-enye aka n'ịkwalite ọgụ. A ga-ahụ ka achọsi ike na USA, ebe ọ bụ na ndị ọrụ ahụike na mba a dị ọnụ, ndị nwe obodo ma ọ bụ ndị were ha n'ọrụ agaghị akwụ ụgwọ ezumike ahụ.
Na okwu ole na ole ọzọ gbasara agịga njigide. N'oge ọrịa coronavirus, ụfọdụ ndị na-emepụta nri na ihe ọverageụ facedụ na-enweghị ụkọ ihe. Iji gbochie ọnọdụ yiri nke ahụ n'ọdịnihu, ha nwere ike ịdị iche iche ọkọnọ site na ịgbasa ndepụta nke ndị na-eweta. Uzo ozo nke n’enweghi nsogbu nke ihe ubara nwere ike bu site n’iji iwu ndi ozo edochi anya ihe eji eme ha. Nke a ga - eme ka azụmahịa dị iche iche gbanwee ngwa ngwa n'etiti isi mmalite nke ihe ndị ọzọ na - eme nri. N'ihi ya, o yikarịrị ka ndị na - ebubata ngwaahịa na stachi ga-amụba ọnụnọ ebe ha nọ na mpaghara ụwa, wee mee ka ụba nke akụrụngwa na-enye ndị na-emepụta ihe ọverageụ andụ na ihe ọ withụverageụ. N’ezie, nsogbu Covid-19 dị ugbu a ga-agbanwe ụdọ ngwaahịa na ngwa nri zuru ụwa ọnụ, mana o siri ike ịkọ otú mmadụ niile ga-esi emekọrịta na gburugburu ọhụrụ.
Tags: 2020 # 2coronavirusstachi na ngwaahịa stachiNyochaa Ahịa
Owuwe ihe ubi yabasị na Shandong na Henan na-agwụkarị n'etiti June, mana n'afọ a ọ ga-aga n'ihu ruo mgbe ...
Nduku dị na Armenia ebilila n'ọnụ ahịa n'ihi oke mbupụ. Onye bụbu osote onye isi ala...
Onye isi otu Soyuzkrakhmal Association Oleg Radin kwuru okwu na Nzukọ ọka Russian All-Russian
Nzukọ ọka niile nke Russia nke Union of Grain Exporters haziri site na nkwado nke Ministry of Agriculture nke Russian Federation na Mee 26-28, 2022, arụchaala ọrụ ya, mmemme ahụ jikọtara ọnụ...
Ịlụso mgbanwe ihu igwe ọgụ na Russia ga-ekwe omume naanị na teknụzụ dị elu
Lyudmila Dulskaya N'August 2021, akụkụ mbụ nke akwụkwọ ihu igwe a na-atụ anya ya, akụkọ nyocha nke isii nke gọọmentị etiti…
Echiche ndị ọkachamara: Taa ọ dịghị ngwaahịa nchebe osisi nke ndị ọzọ na-apụghị dochie anya
Lyudmila Dulskaya Ahịa maka ngwaahịa nchekwa ihe ọkụkụ nọ n'ọnọdụ siri ike: akwụsịla inye ọgwụ ndị a na-ebubata, ọnụ ahịa abawanyela nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, ndị na-ebubata ...
Ahịa mkpụrụ na oge siri ike
Ka anyị na-akụkwu akwụkwọ nri na mbara ala - na ụkpụrụ dị otú ahụ n'afọ a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ọ bụla nke Russia na-abịaru nso n'oge ịgha mkpụrụ. Ememme...
Nri na-ebute ụzọ mgbe niile
Aleksey Krasilnikov, Onye isi nchịkwa nke Potato Union Potato acreage nwere ike ịbawanye n'oge a. Ọnụ nke mmepụta ga-ebili na-enweghị ihe ọ bụla ...
Ọrụ Calcium na-arụ n'ịbawanye ụbara na ogo nduku.
LLC "Maps" malitere oru ngo maka nduku na-eto eto